भाग्य चम्काउने बम्पर – Chitwan Post
हामी नेपालीहरु कर्ममा भन्दा बढी भाग्यमा विश्वास गर्छौं । त्यसैले हामी भाग्यको परीक्षणका लागि ज्योतिषकहाँ लामबद्ध हुन्छौँ । पढ्ने योग, कमाउने योग, पद, प्रतिष्ठा, विदेश जाने, व्यापारलगायत योगैयोगले हामीलाई दौडाइरहेको छ । प्रेमदेखि विवाहसम्म, घरदेखि जग्गाजमिनसम्म, नेता बन्ने, मन्त्री बन्ने सबै भाग्यकै खेल हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भाग्यकै कारण सरकार प्रमुख बने । यो एउटा बम्पर हो । रेग्मी त एक उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता बम्पर परेका नेपालीहरु धेरै छन् । बम्परबाटै नसोचेको परिणाम आउने भएपछि अहिले कर्म गर्न छाडेर भाग्यको पछिपछि कुद्ने जमातहरु कति छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन । जन्मँदैमा ठूलो भाग्य लिएर आएका छौँ हामी । वर्षौं कर्म नगरे पनि हामीलाई भाग्यले ‘चारा’ जुटाउँदै आइरहेको छ । अजब देशको गजबको कहानी छ हाम्रो । भगवान् पुजेकै भरमा हाम्रो मनोकांक्षा पूरा भइरहेको छ । हाम्रो यस्तो भाग्य देखेर विदेशीहरु ईष्र्याले मरिरहेका छन् । उनीहरुको निद्रा भङ्ग भइरहेकोे छ, यता हाम्रा बम्परेहरु भने दङ्ग परेका छन् !
भाग्य चम्किएरै हामीलाई ठूलाठूला लोटरी अर्थात् बम्पर पर्ने गरेको छ । नेपालीका लागि यो बम्परमय सिजन हो । यो बम्परले धानेको मुलुक पनि हो । र, यो बम्परेहरुको बोलाबाला चल्ने महिना पनि हो । त्यसैले यो भाग्यको बम्पर प्रभुको अपरम्पार लीला हो । अहिले देशभर बम्परका धमाकेदार योजनाहरु चलिरहेका छन् । अहिले केमा बम्पर छैन् ? बम्परको पक्षमा कोचाहिँ छैन ?
सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन चलाउन कठिन भए पनि, करोडौँ रूपैयाँ हावामा उडिरहेकै छ । हावामा उडिरहेका रूपैयाँ टिप्न सक्ने हो भने लाखौँ भाग्यमानीहरुको खप्परको बत्ती बल्न सक्छ । अहिले यस्तै भाग्य चम्काउने उद्देश्यले राजनीतिक दलका छोटे नेताहरु बडे नेताको निवासमा हाजिर भइरहेका छन् । ठूला नेताहरु आफ्नै उम्मेदवार क्षेत्र तय गर्न नसकेर रनभुल्लमा परिरहेका बेला जिल्लाका नेताहरुले गणेश शैलीमा नमस्कार गरेर पाँच मिनेटको समय बम्पर पाएका छन् । देश नै बम्परमय भइसक्दा पनि उम्मेदवार छनौट गर्न नसकेर वृद्ध नेताहरुले प्रेसर बढाइरहेका छन् । दलैपिच्छे लोभीपापीहरुको झुन्ड लागेर महिनौँसम्म राजधानीमा डेरावाल बनेका बिचरा उम्मेदवार बम्परको नतिजा पर्खिरहेका छन् । हाम्रो राजधानी सहरमा कोही उम्मेदवारको टिकट त कोही चाडबाडमा घर आउने टिकट र कोही एकै झड्कामा ज्यान बन्ने बम्परको टिकट खोजेर बसिरहेको स्थिति छ । सबैलाई बम्पर परोस्, सवैको भाग्य चम्कियोस् । तर, भाग्य उदय भो भनेर कोही पनि नबम्कियोस् । बम्परको चम्काइ टिकाउचाहिँ नहुन सक्छ क्या !
हाम्रा बम्परे नेताहरु उम्मेदवार छनौट गर्ने सजिलो सूत्र हुँदाहुँदै किन पिरोलिइरहेका होलान् ! यो गुट र त्यो गुट भनेर बबन्डर मच्चाउनुभन्दा भाग्यमा विश्वास गर्ने र आशीर्वादको सहारा लिनेलाई पनि चित्त बुझाउन ‘लक्की ड्र’ अर्थात् गोलाप्रथाबाट उम्मेदवार छनौट गर्नु नै उपयुक्त हुने मेरो ठहर छ । यसरी उम्मेदवारहरुको चयन गर्दा राम्रा–नराम्रा सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ र सबै गुटको सहभागिता पनि हुन्छ । यसमा पनि बम्परै परेर एउटै गुटको छानिए भने पनि केही फरक पर्दैन । बम्पर त जसलाई पनि त पर्न सक्छ नि ! यसरी बम्पर प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरुको छनौट हुन सक्यो भने फेरि एक पटक चुनावी माहौल पनि बन्छ । टिकट नपाए ‘बागी’ उठ्ने संस्कारलाई हटाउन गोलाप्रथा विधिबाट उम्मेदवार छान्नु बुद्धिमानी हुनेछ । बम्परमा भाग लिनेले छनौटमा नपरे पनि बागी उठ्न तथा अर्को गुटका उम्मेदवारलाई हराउने कसरत गर्न नपाइने सर्त पनि राख्न सकिने छ । युवा र महिलाहरुका हकमा पनि यही विधि लागू गर्नु बेस हुन्छ । त्यसो त, वृद्वहरुकै भागबन्डा मिल्न नसकिरहेको अवस्थामा युवालाई बम्पर पर्नु अलि टाढाको कुरा हो ।
यसरी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको भाग्य डिभी परेर अमेरिका गएभन्दा बेसी चम्किने छ । कसैको चाकडी–चाप्लुसी नगरीकनै उम्मेदवार छानिए मतदाताबाट पनि सम्मान मिल्न सक्छ । तर, यो छनौट सबैका लागि हुनुपर्छ । गोलाप्रथा विधि वरिष्ठ नेताहरुका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न दुई–दुई ठाउँबाट चुनावमा उठ्ने संस्कारविरूद्ध आकांक्षी युवा उम्मेदवारले विरोध जनाउनुपर्छ । आखिर संविधानसभा पनि एक किसिमको ‘बम्पर’ नै त हो । नारा संविधान बनाउने भनिए पनि पाराचाहिँ ज्यान बनाउने नै हो । यताउति गरेर चार–पाँच वर्षजति ‘म्यादी जागिर’ पकाउन अहिलेदेखि नै नेताहरुको लाइन सुरू भएको छ । चम्कियोस् बम्परेहरुको खप्पर !
चाडबाड सुरू भएयता उपभोक्तालाई लोभ्याउन बम्परका धमाकाहरु सर्वत्र देखिन थालेका छन् । तपाईं घरायसी किनमेलका लागि बजार जाँदै हुनुहुन्छ भने आफैँ थाहा पाउनुहुनेछ । बम्पर प्राइज सौन्दर्य सामग्रीमा होस्, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा किन्दा होस्, सवारीसाधन किन्दा, एक्स्चेन्ज गर्दा या पेय पदार्थ खोल्दा नै किन नहोस्, अहिले बम्पर उपहारको बाढी नै आएको छ । यस्तो बाढीमा पौडी खेल्न सक्नेले मह¤वपूर्ण बम्पर पनि हात पार्न सक्छ । टिभी किन्दा फ्रिज उपहार, रेडियो किन्दा क्यासेट उपहार, क्याल्कुलेटर किन्दा ल्यापटप उपहार, रिचार्ज गर्दा सुन उपहार, बाइक किन्दा कार उपहार, यतै बहार उतै बहार, उपहारै उपहार !
यो अकासिँदो महँगीमा पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्नेलाई अहिले बम्परको अवसर आएको छ । लखपति, करोडपति, धनपति, लक्ष्मीपति के–के पतिको विज्ञापन हेर्दा लाग्छ, अब बम्परबिना त कुनै सामान नै बिक्री हुन गाह्रो छ । पत्रपत्रिकादेखि घरजग्गा बिक्रीसम्म बम्पर नभए कसैले किन्दैनन् । बम्परको यो होडले यतिसम्म गाँजेको छ कि उपहार परोस वा नपरोस्, उपहार छ है भनेपछि हाम्रो ध्यान त्यसमा तानिन्छ । पचास नपर्ने सामानलाई पनि बम्पर छ भनेपछि सयमा किन्ने हाम्रो संस्कार छ । पाँच रूपैयाँको बम्परको लोभले हाम्रो सय रूपैयाँ चिप्लिरहेको छ । पोखिएको टिप्ने लोभले पोल्टाको पोखिएको हामीलाई हेक्का नै हुँदैन ।
अहिलेको बम्पर नै कस्तोसम्म छ भने बाख्री किन्दा बोका उपहार, पाडो किन्दा भैँसी नै उपहार पाइन्छ । बम्परकै पछि लाग्दा नलिनु पर्ने उपहार पनि लिन बाध्य हुनुपर्छ । बम्परमा भाग लिँदा आफैँ होसियारी अपनाउनु उत्तम हुन्छ । तपाईं पनि बम्पर पार्न वा बम्पर प्राइजका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने कत्ति चिन्ता मान्नुपर्दैन, तपाईंलाई एक न एक बम्परले ध्यान खिच्ने छ । त्यसपछि बम्परमा फ्ल्याट, बम्परमै कार र बम्परमै विदेश घुम्ने सपना साकार पार्न सक्नुहुनेछ । कुनै पनि बम्परबाट तपाईंको भाग्य चम्किएन भने तपाईं आफैँले बम्पर आयोजना गरेर अरुको भाग्य चम्काउने अफरसहित आफ्नो भाग्यचाहिँ चम्काउन सक्नुहुनेछ । यो भाग्य चम्किने भनेकै एकाध व्यक्तिहरुकै हो, अरु सब चम्किने मात्र हुन् । चम्किन्छन्, थाक्छन् अनि आफैँ चुप लाग्छन् ।
आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने, मतदाताको विश्वास जित्ने, नेतृत्व क्षमता देखाएर लोकप्रिय बन्ने, जनताको नेता बन्न चाहने, पद, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिको लोभ नगर्ने, पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्तिका हकमा ठूला नेताको भोजनालयदेखि शौचालयसम्म लामबद्ध लागेर बिन्तीभाउ गर्न पर्दैन । जित्ने÷नजित्ने ग्यारेन्टी नभएको उम्मेदवारका लागि त यति दौडधूप गर्नेले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने के गर्लान् ? त्यो त झन् टाढाको विषय हो ।
चुनाव हुने÷नहुने, मिति सर्ने÷नसर्ने, सरकार फेर्ने÷नफेर्नेजस्ता शंका÷आशंका बढे पनि अहिले चुनावकै चर्चा बढी छ । भलै, १६ अर्ब खर्च गरेर पनि संविधान बन्ला वा नबन्ला, साँढे तीन करोड जनताको खप्परमा बत्ती बल्ला वा नबल्ला । हाम्रो व्यक्तिगत भाग्य त हाम्रै थाप्लामा छ, हाम्रै कर्ममा छ र हाम्रै बम्परमा छ । तर, मुलुकको भाग्यको फैसला यहाँका जनताको हातबाहिर छ । हाम्रो मुलुकको भाग्य पनि बम्परबाट नै निर्धारण हुनेवाला छ । यो यही संविधानसभाको बम्पर हो । यो बम्परले पनि मुलुकको भाग्य चम्किएन भने कहिले चम्किने हो, कसले चम्काउने हो ? नारायणगोपालको गीतले भनेजस्तै ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्की आउने हो कि होइन केही थाहा छैन….।’